Abavelisi beTanki lokuGcina amanzi kunye nababoneleli - China iTanki lokuGcina amanzi eTanki
I-1-Pillow Water Tank Iitanki zenziwe ngelaphu eliqinisiweyo nge-PVC / TPU egutyungelweyo kwaye ibonisa imilo yomqamelo xa itanki igcwele. Ingasetyenziselwa ukugcina amanzi emizi-mveliso, amanzi omlilo, ukuvuna amanzi emvula, amanzi okunkcenkceshela, amanzi axubeneyo ekhonkrithi, amanzi athambileyo aluhlaza, ukugcinwa kwamanzi amdaka kunye nokuqiniswa kweoyile. Izibonelelo zayo zezi: zinokusongwa xa zingenanto, ukukhanya kobunzima kwaye kulula ukuhambisa, ukufakelwa kwesiza kulula, ubomi obude kunye neendleko zokugcina eziphantsi. Ubungakanani njenge followi ...
Imveliso intshayelelo emfutshane Itanki lamanzi lesilinda yenziwa ngelaphu eqinisiweyo kunye ne-PVC / TPU egutyungelweyo kwaye ibonisa imilo yesilinda xa itanki igcwele. Ingasetyenziselwa ukugcina amanzi emizi-mveliso, amanzi omlilo, ukuvuna amanzi emvula, amanzi okunkcenkceshela, amanzi axubeneyo ekhonkrithi, amanzi athambileyo aluhlaza, ukugcinwa kwamanzi amdaka kunye nokuqiniswa kweoyile. Izibonelelo zayo zezi: zinokusongwa xa zingenanto, ukukhanya kobunzima kwaye kulula ukuhambisa, ukufakelwa kwesiza kulula, ubomi obude kunye neendleko zokugcina eziphantsi. S ...
Itanki yetswele iyakwazi ukuzimela. Isetyenziswa ngokubanzi kwifama yeentlanzi, ukukhusela umlilo, indlu yokugcina amanzi. Indawo evulekileyo ephezulu kunye nendawo ekuhlalwa kuyo, ilunge kakhulu kwindawo eyomileyo.